Matiantoka ny mpamboly any Alaotra: tsy mihoatra ny 1000 Ar ny kilaon’ny akotry | NewsMada
Matiantoka ny mpamboly any Alaotra: tsy mihoatra ny 1000 Ar ny kilaon’ny akotry
Sarotra izao ny mahita zezik’omby azo vidina noho ny halatra omby. Mety ho efa nisy nanao io fanamarihana io, fa Razafimbola Jean Paul Léonard, monina ao Antanifotsy, Ambatondrazaka, mitsangana ho vavolombelona. Mpamboly lehibe izy satria sady mamboly any Ampitan’ny farihin’Alaotra, PC.15, no mamboly amina toerana maromaro any Ampitandrefana. Mihoatra ny telo hekitara isanisany avokoa ny trandrahiny. Toy ny mpamboly vary rehetra, mikaikaika izy fa mavesatra ny masonkarena amin’ny fambolena vary.
”Tsy mahaleo ny sarany ny vidiny, be loatra ny vola lany isaky ny hekitara, satria efa kotra ny tany ka mila zezika, difotry ny ahitra ny vary raha tsy manao “deshormones, faharatsian’ny toetrandro, sns…Tsy mety mihoatra ny 1 000 Ar ny kilaon’ny akotry, misy aza 600 Ar monja, araraotin’ireo mpanangom-bokatra. Tsisy tombony !”, hoy Razafimbola Jean Paul Léonard.
Tsara ny zezika tain’akoho
Miompy akoho aman-jatony ingahy Léonard. Ny tain’ireo akoho ireo afangarony amin’ireo zezi-bazaha efa fampiasa. Nafafiny amin’ny tanimbariny ka hita fa mba nihena ny mason-karena. “Ampiampy ny orana taty Alaotra, afa-tsy tany amin’ny tapany avaratra. Efa mena ny vary izao. Nahomby ary antenaiko fa mba hahita tombom-barotra aho”, hoy ny fanazavany
Tsy azo lalovam-potsiny anefa ireo fanamarihana nataony, sady mikaroka izy. Karazam-bary “Tahia” novoleny, manome 5 ka hatramin’ny 6 t /ha.
”Izahay mieritreritra, fa raha misy fanapahan-kevitra hentitra hampisy vokatra betsaka aty Alaotra, ireo tohodrano no mila amboarina tsara”. Tsy indray mandeha no mamboly amin’ny taona iray amin’izay. Mitovy amin’io ny hevitry ao amin’ny Foibem-paritry ny Fambolena. Mila tena ifotorana koa ny hikarakarana ny tontolo iainana !